Ubuhle bomfazi Iimpawu ezibonakalayo ezivela kwiLCN
Abasetyhini bayazi ukuba i-manicure enye yezona zinto ziyinxalenye yomfanekiso ococekileyo. Izikhonkwane ezichanekileyo, eziqingqiwe ngomthunzi wesitayela, ziyakwazi ukugxininisa ngokugqithisileyo ukubukeka kwefestile kwaye zenze ingqwalasela kwizandla ezihle kakuhle. Kwaye umgubo wamathuba kukubonisa ukucinga kunye nokuhlola umbala wemibala eyahlukeneyo yeesilisi ze-nail zanamhlanje. Enyanisweni, ukulandela iifashthi zefestile, ungakulibali ngenye into ebaluleke kakhulu - ukugcina izipikili ziphilile kwaye ziqine, kufuneka usebenzise iindlela ezikhuselekileyo. Kwakhona i-hitch, kuba abaninzi abakhiqizi basebenzisa iikhemikhali ezinobungozi ukuphucula ukuqina kwe-lacquer, leyo, ngakwesinye icala, iqinisekisa ukugcinwa kweengubo; Ngethamsanqa, iingcali ze-LCN ziye zavelisa iteknoloji entsha yokuvelisa i-polam yokhonkwane ye-ceramic, engenakulimala ngokupheleleyo kwimpilo.
I-Cosmetics LCN - inhlanganisela yekhulu lamava kunye nobuchwepheshe obutsha
I-brand yeLCN yenye yezinto ezidumileyo zehlabathi ezivelisa iimveliso kunye nezokuzikhusela ezikhuselekileyo. Inkampani inenkathalo ngempilo yabathengi bayo, kwaye ngoko isebenzisa iimpumelelo ze-cosmeceutics zakutshanje ekuvelweni kweepikili eziviniweyo. Uchungechunge lwezobugcisa ze-ceramic varnishes ezivela kwi-LCN lubonakaliswe ukunganyaniseki okwenyukayo - umquba wakho unokuba luncedo kwiintsuku ezili-10. Ifom ekhethekileyo iquka izithako zendalo kunye nezongezelelo zamaminerali. Amandla ayo kunye nokuzinza kwalo mveliso kubangelwa iiceramics ezingena kwisakhiwo sayo, inzuzo enkulu ekukhuselekileyo. Imvelaphi yemvelo yale nxalenye ivumela ukufumana umphumo wokubhenca kwexesha elide ngaphandle kokulimaza kwimpilo. Siyabulela kwi-ceramics, i-LCN i-varnishes ayinelanga kuphela, kodwa nayo ine-glossy glossy glossy kunye nekhuselo elithembekileyo kwi-chips kunye nemijelo. Ukongezelela, iingubo ezinqabileyo ze-ceramic varnish zikhusela isikhonkwane kwimiphumo enobugwenxa bezinto zangaphandle, kuquka neekhemikhali ezinobungozi zasemakhaya. Ubhudu obumgangatho ococekileyo buyakuvumela ukuba usebenzise i-varnish ngokulinganayo, ukonakalisa ngokugqithiseleyo isikhonkwane ngokubanzi.
Ukhuseleko ngaphezu kwakho konke!
Njengazo zonke iimveliso ze-LCN, i-ceramic varnishes ihambelana ngokupheleleyo nemigangatho yemigangatho yaseYurophu kwaye iyingxenye yeBig5free. Oku kuthetha ukuba imveliso yale mveliso ayisebenzisi iinqununu ezi-5 ezinobungozi kakhulu kwimpilo: i-toluene, i-formaldehyde, i-camphor, i-resin formaldehyde kunye ne-dibutyl phthalate. Ukuze ususe iiperamic zokugcoba i-LCN, akukho nkunkuma ekhutshiweyo yeekhemikhali equkethe i-acetone kunye nokucinywa kwetafile yesikhonkwane.
Yonke imibala yobuninzi
Umbala wombala we-ceramic varnishes ukusuka kwiLCN unama-shades angama-100. Phakathi kwabo, kuphela izisombululo zamanqaku ezikhoyo kunye nezindlela eziqhelekileyo. Ukuqokelela i-varnishes kuzaliswa ngee-shades ezintsha ezine ngonyaka, ngaphambi kwexesha elitsha lemodeli. Oku kuthetha ukuba nangona i-fashionista enzima kakhulu inokukhetha umthunzi "ofanayo", olungele umfanekiso wakhe.
Sibelana ngemfihlelo, indlela yokudala umququzeleli oqinileyo ngaphandle kwemichiza kunye nemijelo
Ukutywina izipikili nge-wax: sidibanisa kunye ne-LCN yintoni le nkqubo
Ukutywina izipikili kwi-fast-home home
I-LCN Inkqubo Yonyango Lwemvelo: Amanyathelo amane kwiisilumko ezinempilo
I-varnish ayidli ngexesha lokumisa kwiLCN
Bigos kwi sauerkraut
Kubukeka njani ukubulala? Ukutolika kweencwadi ezithandwayo zokuphupha
U-Ksenia Sobchak uziqhenyayo ubonisa isifuba sakhe emva kokubeleka
Indlela yokususa ngokukhawuleza ukukrakra
UDmitry Shepelev ubuyele kwiShaneli esisodwa
Horseradish nge beetroot
Yintoni okufuneka uyidle emva kwe-35: ezi mveliso 10 ziza kuguga!
Indlela yokugcina i-Pisces-man
Unogqabi okhulayo ekhaya
Yintoni ongayenziyo ukusila izicathulo, zeziphi izicathulo ezingahambi
Iimfihlelo zokupheka iparaji
Kutheni ukunyameka kwabantu kuthetha kwiphupha
I-karma, uthando lwekarmic kunye nesiphelo
Ukuxininiswa kwe-Nasal ngexesha lokukhulelwa